Waxaa uu la dagaalamay Al-shabaab waxaase lagu dilay meel uusan cabsi ka qabin | Somsoon
Home WARAR Waxaa uu la dagaalamay Al-shabaab waxaase lagu dilay meel uusan cabsi ka...
Waxaa uu la dagaalamay Al-shabaab waxaase lagu dilay meel uusan cabsi ka qabin
Sarkaal ka tirsan milateriga Soomaaliya islamarkaana hore uga tirsanaa saraakiisha ilaalada Madaxtooyada oo lagu magacaabo Maxaadeey Saleebaan Eebakar ayaa lagu dilay bar-kontarool oo laga ilaaliyo Madaxtooyadda Soomaaliya.
Israsaaneyn dhexmartay ilaaladii Taliyaha guutadda Gor-Gor ee military-ga Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay mid ka mid ah ilaaladiisii.
Goob-joobeyaal ayaa sheegay in israsaaseyntu ay dhex martay ilaaladda sarkaanka la dilay iyo ilaaladda Hotel Ma’ida Ex Nasa Hablood 2 oo u dhow taaladda Xaawo Taako.
Gaariga uu saarnaa Taliyaha ayaa la sheegay inuu ka yimid dhinaca Baar shabeelle, waxaana wadadaas loo ogolyahay in ay baarbuurtu ka baxaan oo keliya.
Taliye Maxaadeey ayaa soo noqday Ilaalada gaarka ah ee Madaxweynayaashi hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, sidoo kale waxaa uu ka mid ahaa saraakiishii dalka dibaddiisa waxbrashada u aaday
Article horeMadaxweyne Farmajo “Taalooyinku waxay na xasuusinayaan taariikh”
Article socoda Sarkaal ka tirsan Wasaarada Maaliyadda Puntland oo Galkacyo lagu dilay